100G / 200G / 400G Cabirka Fikradaha Farsamada
Naqshad Naqshad Qaadan Qalabka Farsamada Muujinta iyo Awoodda Hirgelinta Qaabdhismeedka Dhexgalka
Iyadoo tijaabinta tijaabada lagu kalsoon yahay saacadaha 168 ilaa saacadaha 500, ma aha oo keliya isbeddelka xakamaynta awoodda aragtida yar yar, laakiin dareenka ayaa sii fiicnaanaya oo ka sii fiican leh waqtiga uu tijaabada socdo. Daraasadani waxay soo rogeysaa macluumaadka dhaqanka ee tijaabinta tijaabada kalsoonida.
Natiijada guud ee tijaabinta tijaabada dhaqanka ayaa ah in waxqabadka sheyga uu sii xumaanayo oo ka sii daraya waqtiga dheeriga ah ee tijaabada lagu kalsoon yahay, ka dibna wuxuu kudhow duub.
Laakiin Gigalight wuxuu soo jiitaa gabagabo isku mid ah iyada oo la raacayo qiyaasta dib-u-celinta ee module-ka gudbinta ka dib markii la beddelo shuruudaha imtixaanka: tijaabada waxsoosaarka waxsoosaarka waxay sare u qaadayaan tayada wax soo saarka iyo waxqabadka gudbinta
Natiijooyinka tijaabada ah ayaa muujinaya in:
Tiknolojiyadda 100G COB waxaa lagu gudbin karaa heerarka isku halleynta warshadaha. Sidaa darteed, uma baahnin inaan yareyno shuruudaha kalsoonida sababtoo ah xogta weyn waxay leedahay jawi ka wanaagsan kan isgaarsiinta.
2) 100G naqshadaynta hawo qaadashada waxay hagaajin kartaa waxqabadka muddada dheer iyada oo loo marayo imtixaanka kalsoonida. Tani waxay muujinaysaa in isku-kalsooniddu ay tahay arrin lagama maarmaan ah halkii laga saari lahaa qodob ka fogaansho ee soo saarista 100G.
Faa'iidooyinka COB Pack
Tijaabada COBB waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo kharashaadka iyo kaydinta maalgelinta. Sababtoo ah tiknoolajiyada IC adigana si toos ah ayey ugu xiran tahay guddiga wareegga wareegga ah, iyada oo aan baako gooni ah loogu talagelin IC chip, si kharashka loo yareeyo. Iyo si toos ah khadka tooska ah ee wareega wareega ee chip IC ah kharash badan ka badan baakooyinka horumarsan. Sidaa daraadeed, tiknoolajiyada COB waxay u muuqataa in la horumariyo si loo sii hagaajiyo farsamada IC.
On account ah in chips IC ka yar yahay qaybaha leh horseedka horseed, COB wuxuu leeyahay faa'iidooyin aad u fiican ee badbaadinta booska. Cabbirka qalabka xadhigga leh ee aan xidhnayn baakooyinka IC ka yar ayaa ka yar baakooyinka duuban ee laba-in-ku jira, oo ka hadlaya 1 / 4, oo ka badbaadinaya baakad ka badan baakadaha Chip Carrier (LCC), oo yareeynaya cabbirka. Tijaabada COB waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa goobaha codsiga ee baakadaha kale ee aan loo hirgelinin.
Iyada oo la isku dheelitirka ballaarinta heerkulka inta u dhaxaysa qalabka wax lagu xiro iyo guddiga wareega wareega oo la isku daray, ayaa la isku haleynayaa. Waqtigii hore, marka la eego isfaham la'aanta balaarinta heerkulka dabka iyo sheyga daabacan ee daabacan, cadaadis xad-dhaaf ah ayaa laga soo saaraa meesha wax lagu xiro ee ka dhexeeya jilibka iyo wareegga wareegga wareegga. Iyada oo la horumarinayo qalabka wax lagu xiro, arrintani ma aha mid cad. Sidaa darteed, tiknoolajiyadda COB waa mid aad u soo jiidasho leh.
Marka laga hadlayo tiknoolajiyada yar-yar, waxaa sidoo kale loo diyaarinayaa dhinaca COBAD. Qaybta CMOS oo leh koronto yar oo hooseeya waxay ku haboon tahay COB technology oo leh awood awood leh. Isla mar ahaantaana, chip IC wuxuu u kobcay isbeddelka isticmaalka iyo isticmaalka semi-isticmaalka, Tijaabada COB ayaa aad muhiim u ah.
Nidaamyo badan oo ka mid ah tiknoolajiyadda COB waxay xaqiijin karaan wax soo saarka tooska ah. Ka dib, in badan oo soo saarayaasha ayaa xiiseyn doona tiknoolajiyada COB.